एनआईसी एशिया सेलेक्ट-३० (इण्डेक्स फण्ड) आजबाट बिक्रीमा, कसरी दिने आवेदन ? - Arthasansar
एनआईसी एशिया सेलेक्ट-३० (इण्डेक्स फण्ड) आजबाट बिक्रीमा, कसरी दिने आवेदन ?
विहीबार, १० असार २०७८, १० : २२ मा प्रकाशित
एनआईसी एशिया क्यापिटल योजना व्यवस्थापक रही एनआईसी एशिया म्युचुअल फण्ड अन्तर्गत सञ्चालन हुने गरी एनआईसी एशिया सेलेक्ट-३०(इण्डेक्स फण्ड) को आज बिहिबारबाट बिक्रि खुल्ला गरिएको छ । यो सात वर्ष अवधिको म्युचुअल फण्ड हो ।
ुएनआईसी एशिया बैंक कोष प्रवर्द्धक रहेको म्युचुअल फण्डले प्रतिइकाई १० रुपैयाँ अंकित दरमा एक अर्ब रुपैयाँ बराबरको १० करोड इकाईहरु निष्कासन गर्न लागेको हो । जसमध्ये १५ प्रतिशत अर्थात् एक करोड ५० लाख इकाई कोष प्रवर्द्धक एनआईसी एशिया बैंकलाई सुरक्षित गरी बाँकी रहेको ८ करोड ५० लाख इकाई सर्वसाधारणलाई छुट्याइएको छ ।
आज असार १० गतेबाट निष्कासन भएको यो फण्डमा लगानीकर्ताले छिटोमा असार १४ गतेसम्म र ढिलोमा असार २४ गतेसम्म आवेदन दिन सक्नेछन् ।
लगानीकर्ताले न्यूनतम १०० इकाईदेखि अधिकतम १ करोड इकाईसम्म आवेदन दिन सक्नेछन् ।
त्यसैगरी, यसमा बिक्री प्रबन्धकको काम एनआईसी एशिया क्यापिटल लिमिटेडले गर्नेछ । लगानीकर्ताले धितोपत्र बोर्डबाट आस्वा अनुमति लिएका सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय संस्था तथा मेरो शेयरबाट पनि आवेदन दिन सक्नेछन् ।
म्युचुअल फण्ड के हो ? यसमा लगानी गर्न इच्छुक लगानीकर्ताले जान्नुहोस् यी कुराहरु: